Elvs System And Fire Equipment Distribution | SANN Engineering Co., Ltd. (Myanmar)
Electrical Low Votage ( ELVs) စနစ်များအား သုံးသပ်တင်ပြခြင်း
၎င်း CATV, စနစ်တွင် အဓိကအားဖြင့် (၂)ပိုင်းရှိပါသည်။ Headend ပိုင်းနှင့် distribution ပိုင်းတို့ဖြစ်ပြီး Headend ပိုင်းတွင်လိုအပ်သော ရုပ်သံပိုင်းများအား စက်ကိရိယာဖြင့် တပ်ဆင်ပြီး ရုပ်သံလှိုင်းများ ရယူခြင်း ၊ ဖြန့်ဝေနိုင်ရန် စီစဉ်ခြင်း ( processing ) တို့ကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ Distribution ပိုင်းတွင်မူ ရောက်ရှိလိုသော အခန်းများသို့လုံလောက်သော singal ရရှိရန် coaxial ကြိုးများဖြင့် သွယ်တန်းဖြန့််ဝေပေးသော အပိုင်းဖြစ်ပါသည်။
၎င်းတွင် ရုပ်သံလိုင်းများရရှိရန် အတွက်လိုအပ်သော အင်တာနာများ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဂြိုလ်တုမှရယူ၍ ဂြိုလ်တုစလောင်းများ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဖမ်းစက်များ၊ လှိုင်းပြောင်းစက်များ ( trans-modulator)၊ modulator များ၊ ရုပ်သံလိုင်းများပေါင်းစပ်စက်များ၏ (Combiner) များတပ်ဆင်ခြင်း၊ တို့ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့အတွက် ဓာတ်အားပေးစက်( power supply) နှင့်လုံလောက်သော ထုတ်လွှင့်မှုရရန် ချဲ့စက်များ ( Amplifier) စသည့်တို့ပါဝင်ပါသည်။
၎င်းအပိုင်းတွင် Coaxial Cable ကိုအသုံးပြုပါသည်။ သို့သော် အသုံးပြုသော ဧရိယာနှင့် အကွာအဝေးပေါ် မူတည်၍ trunk line, distribution line နှင့် drop line ဟူ၍ ကွဲပြားခြားနားသွားပါသည်။ Headend မှ trunk line နှင့် ပို့လွှတ်လေ့ရှိပြီး ခွဲထွက်မူကို distribution line အဖြစ် အသုံးပြုကာ ၎င်းမှအိမ်များ ( TV point) များသို့ drop cable ဖြင့်အသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်။ နေရာပေါ်မူတည်၍ ကြိုးအရွယ်ပမာဏ ကွဲပြားမှုရှိပါသည်။ Distribution ပိုင်းနှင့် Drop line တို့အတွက် RG-11 နှင့် RG-6 cable တို့ကို အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းတွင် သင့်လျော်သော tap-off များ၊ divider များ ၊ အသုံးပြုရသကဲ့သို့ လွှင့်အားပမာဏ လျော့နဲမှုကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန် amplifier တို့ကို အသုံးပြုပါသည်။ ဖြန့်ဝေသောလိုင်းများ အခြားနှောက်ယှက်မှု ( distortion) များရှိပါက ဖြေရှင်းရန် filter, equalizer, attenuator တို့ကိုလည်းလိုအပ်သလို အသုံးပြုရပါသည်။
ယင်းစနစ်သည် ယခင်က သုံးစွဲခဲ့သော၊ လက်ရှိတွင် အသုံးများနေသေးသော စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် receiver, transcoder, processing equipment တို့ကို အသုံးပြုသောကြောင့် analog စနစ်မျာသာ ဖြစ်ကြပါသည်။ အချို့ manufacture များသာ modulator တစ်လုံးစီမှ အတွက်ကို combiner တွင်ပေါင်းပေးလေ့ရှိသော်လည်း အချို့စက်အမျိုးအစားတို့မှာမူ loop စနစ်ဖြင့်သာ ပေါင်းပေးလေ့ရှိပါသည်။ အောက်ပါ နမူနာပုံစံဖြင့် တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
လုံခြုံရေး ကင်မရာစနစ်တွင် နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာဖြစ်သော POE ( Power on Ethernet) စနစ်ပါဝင်ပြီး ဖြစ်၍ ကင်မရာအား ပါဝါပေးရာတွင် သီးခြားတပ်ဆင်ရန်မလိုဘဲ NVR ( Network video recorder) မှတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကင်မရာ၏ အပြင်ဘက်တွင်တပ်ဆင်ထားရာတွင် ရေစိုခံခြင်း ဖုန်ဒဏ်များခံနိုင်စေရန် ( IP66) စနစ်သည်လည်း ထည့်သွင်းထားသည်။ ညဘက်တွင် အလင်းရောင်ရရှိမှုနည်းချိန်တွင် အလင်းစနစ်ပေးနိုင်သော IR စနစ်များ Varifocal Length စနစ်များ၊ ကင်မရာများသည်အွန်လိုင်းစနစ်ဖြစ်သော IP camera များဖြစ်သောကြောင့် ဖုန်းဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်သော Web browser EMS စနစ်များပါဝင်သည်။ Operation ပိုင်းတွင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ စက်ထိန်းချုပ်သူမှာအလွယ်တကူ ထိန်းသိမ်းနိုင်သော စနစ်များပါဝင်သည်။
PABX ( Public Automatic Branch Exchange) စနစ်ဆိုသည်မှာ အဝင် ပင်မှဖုန်းလိုင်းအား လိုင်းခွဲခြင်းဖြင့် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် အဝင်တစ်လိုင်းလိုင်းခွဲ 25 လိုင်းခန့်တပ်ဆင်နိုင်ပြီး လိုအပ်ပါက အဝင်လေးလိုင်း လိုင်းခွဲ 32 လိုင်းထိအသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသည်။ Opeartor ထိန်းချုပ်နိုင်သော စနစ်ပါဝင်သည့် Digital Key Phone ပါဝင်ပြီး ( Disa) အလိုအလျောက် ဖြေကြားသောစနစ်ပါဝင်ပြီးလိုင်းခွဲကို တိုကရိုက်ခေါ်ဆိုနိုင်ရန်လည်း ပြုလုပ်ထားနိုင်သည်။ ဖုန်းဘေလ်ကောက်ခံရန် software ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်သည့်အပြင် အဝင်လိုင်းအား လေးလိုင်းအထိ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် လိုင်းတစ်လိုင်းမအားပါက အခြားအသုံးမပြုသည့် ဖုန်းလိုင်းမှ တဆင့် ကို ခေါ်လိုသော ပြင်ပနေရာအားဆက်သွယ်နိုင်သည်။ လိုင်းခွဲအခြင်းခြင်း ခေါ်ဆိုရာတွင်ကုန်ကျစရိတ် မရှိပဲ ပြင်ပသို့ခေါ်ဆိုမှသာ ငွေကောက်ခံခြင်းစနစ်ဖြစ်သောကြောင့် ဟိုတယ်အခန်းအခြင်းခြင်းဆက်သွယ်ရာတွင်လည်းကောင်း Reception ကိုလည်းကောင်း လိုအပ်သလို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Data Wifi System
အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်သောစနစ်ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုရာတွင်ဝါယာလက်စနစ် Acces Point ဖြင့် တပ်ဆင်ထားသောသောကြောင့် ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ ကိုယ်ပိုင် laptop ဖြစ်စေ ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုခွင့်အတွက် အကောင့်သုံးမျိုးပြုလုပ်ထားမည်ဖြစ်ပြီး admin ပိုင်း၊ guest account နှင့် user account များထည့်သွင်းထားမည်ဖြစ်သောကြောင့် internet စနစ်လုံခြုံရေးကို အလွယ်တကူ ထိုးဖောက် မဝင်ရောက်နိုင်ပေ။ အင်တာနက်အဝင်လိုင်းအတွက်မူ Fiber optical သို့ broadband satellite စနစ်အား တပ်ဆင်သူ၏ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်၍ သက်ဆိုင်ရာ operator တွင်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
Firealarm စနစ်သည် မီးအချက်ပေးစနစ်ဖြစ်သောကြောင့် ဟိုတယ်များ၊ ဈေးဆိုင်များ၊ ဌာနာဆိုင်ရာများတွင် အသုံးပြုမူအများဆုံးဖြစ်သည်။ မီးအချက်ပေးစနစ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်မှာ အရေးပေါ်အချိန်တွင် Manual call point မှနေ၍ သက်ဆိုင်ရာလူများအား အသံခေါင်းလောင်းဖြင့် အလိုအလျောက် သတိပေးခြင်း စနစ်ဖြစ်သည်။ Manual calll point မှာ firealarm panel မှတဆင့် ခေါင်းလောင်းအားမြည်တည်းခြင်းဖြင့် အချက်ပေးနိုင်သည်။ အသံအချက်ပေးစနစ် အပြင်ထပ်မံ၍မီးခိုးစောင့်ကြည့် ကိရိယာများ (smoke detector)၊ အပူစောင့်ကြည့်ကိရိယာများ ( Heat Detector)၊ ဓာတ်ငွေ့စောင့်ကြည့်ကိရိယာများ (gas detector) များဖြင့်လည်းချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ Fire Panel တွင် အဆောက်အဦးအား zone အပိုင်းလိုက်ခွဲခြား၍ panel မှအရေးပေါ်နေရာအားချက်ခြင်းသိရှိနိုင်ရန်လည်းပြုလုပ်ထားပါသည်။
Lingjack providesacomprehensive range of reliable and proven fire safety solution for both commercial and industrial premises. Active fire protection is an integral part of the fire safety strategy ofabuilding. The most common combination of fire suppression system that are installed withinabuilding to provide an adequate level of fire includes Fire Extinguishers, Fire Hose Reel System, Fire Sprinkler System and Wet or Dry Riser System.
Typical Pump Room Layout For Wet Riser & Sprinkler System
Dry & Wet Riser System Components
Fire Hose Reel Systems Components
Pillar Hydrant Components
Accessories For Portable Fire Extinguishers